::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather भाषण होइन स्पष्ट रोडम्याप र पुरा गर्ने आधारसहित अघि बढेको छु : गडतौला:: Rojgar Manch ::
विष्णुगोपाल गडतौला,उपमेयरका उम्मेदवार, म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका, तेह्रथुम
विहिवार, २०७४ जेष्ठ २४ गते ००:५९
स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन नजिकिदै जादा तेह्रथुम जिल्लाको म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका वडा नं. ४ निवासी युवा समाजसेवी तथा व्यवसायी विष्णुगोपाल गडतौलाले सोही नगरपालिकाको स्वतन्त्र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । विगतदेखि नै स्थानियस्तरमा सामाजिक र विकास निर्माणका क्रममा अग्रपंक्तिमा देखिने गडतौलाको उम्मेदवारीलाई उक्त क्षेत्रका जनताले विशेषरुपमा हेरेका छन् नै दलगत राजनैतिक शक्तिहरुमासमेत ठुलो तरंग पैदा भएको छ । उनै समाजसेवी तथा विकासप्रेमी गडतौलासँग आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य र भावि एजेण्डाका बारेमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाई व्यवसायी मान्छे किन एक्कासी राजनितीमा होमिनुभयो ?
यसलाई राजनिती नभन्नोस सेवा भन्नुहोस । मेरो क्षेत्रमा हरेक सामाजिक कार्य र विकास निर्माणका सवालमा म विगतदेखि नै निस्वार्थ ढंगमा संलग्न रहदै आएको छु । अहिले संविधानले जुन स्वरुपबाट स्थानिय तहलाई दिएको अधिकार छ र सोही बमोजिम चुनाव हुदैछ यो केवल चुनाव तथा नेता छान्ने प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर स्थानिय तहको भविश्यसमेत जोडिएकाले म अघि सरेको हु । कुरा रहयो व्यवसायको यो भनेको बाच्ने आधार हो र यसैले सेवाकालागि आधार दिन्छ । व्यवसायले मलाई सफल जिवनको यो ठाँउसम्म पु¥याएर नगरपालिका हाक्नसक्ने क्षमता प्रदान गरेको हो । यसैले व्यवसाय र सेवालाई साथसाथै अघि बढाउनु हामी युवा जगतको कर्तव्य पनि हो ।
अनि राजनैतिक दलबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको त होइन नि ?
साच्चै भन्ने हो भने विगतमा पनि न म कुनै राजनैतिक दलको सदस्य थिए वा थिइन यो सवालको विषय होइन । निस्वार्थ ढंगमा काम गर्न कुनै दल विशेषको फेर समातेर जानै पर्दैन नि । म दलको नेता होइन मेरा नगरवासीको मनमा बस्न चाहन्छु । सायद मेरा विगतदेखिका काम देखेर उहाँहरुले यसको छिनोफानो दलहरुलाई गरेर देखाउनेमा म विश्वस्त पनि छु ।
अनि यत्रो विश्वास रहेछ त मेयरमा उम्मेदवारी नदिएर उपमेयरमा दिनुको अर्थ चाहि के हो नि ?
तपाईले एकदमै सार्थक प्रश्न सोध्नुभयो । मलाई सबैले यही प्रश्न राख्ने गर्छन । अझैपनि राजनैतिक दलको धङधङी हाम्रो समाजमा यथावत नै छ । दलगत छविलाई तिलाञ्जलि दिएर स्वतन्त्र ढंगले प्रतिष्पर्धामा जादै गर्दा नगरवासीको भावना समेटदै आफ्ना एजेण्डा सुनिश्चित गर्न प्रमुख पदभन्दा पनि सहायक पद रोजेको हँु । अर्को कुरा महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि मेयर पद उहाँहरुको सम्मानका लागि छाडेको हु । सो हुदा मलाई रुचाउने अन्य राजनैतिक दल समर्थित जनताहरुलाई ६ भोट आफ्नो दललाई र १ भोट एजेन्डा तथा विकासका लागि दिने मौका मिल्छ । यो मैले नगरवासीहरुको सल्लाहमै गरेको हु ।
सारमा तपाईको नगरमा अहिले देखिएको ज्वतन्त समस्या के हो र हिजो के कति काम गर्नु भयो त ?
हिजोका दिनमा हाम्रो जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने अभियानमा सक्रिय भै मैले कार्य गरेको नगरवासीलाई थाहा नै छ । यसलगायत खानेपानी र सडक विस्तारका लागि धेरै नै लागिपर्यौ । हामीले गरेका यी प्रयत्न पर्याप्त छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबै विकासका आधारभूत आवश्यक्तामा हामी धेरै पछि छौ अब यसलाई गुनासोकै रुपमा राख्ने कि गरेर देखाउने भन्ने चुनौती हामीमा छ । यसलाई ठोसरुप दिन नै म अघि सरेको हु र पुरा गरेरै छाडछु पनि । अरु जस्ता आश्वासन र भाषण होइन स्पष्ट रोडम्याप र पुरा गर्ने आधारसहित अघि बढेको छु ।
तपाईका प्रमुख एजेन्डाबारे केहि बताइदिनुहोस न ?
सदरमुकामकै नगरपालिका भएपनि अहिले यसमा आसपासका ६ गाविस पनि समावेश भएको छ । ती ग्रामिण भेगलाई बाकि शहरी क्षेत्रको दाजोमा पु¥याउन म प्रतिवद्ध भएर अघि सरेको छु । उता यहाँको सडकको दुर्गति हेर्दा मनै दुख्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै नगरका हरेक टोलमा सडक संजाल पु¥याउनु मेरो प्रमुख प्रतिवद्धता हो । घरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी, खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई, कृषिमा आधुनिकिकरण र कृषि फार्मको स्थापना, धार्मिक तथा पर्यटकियस्थलको विकास र प्रवद्र्धन, अस्पताल निर्माण र २४ घण्टै सेवा दिनेगरी एम्वुलेन्सको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमै दिने व्यवस्थालगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छु । स्पष्ट एजेण्डा तथा पुरा गर्ने आधारशिलासहित म उपमेयर पदका लागि अघि बढेको हु । मेरा एजेण्डा तथा प्रतिवद्धताहरु विस्तृतरुपमा घोषणापत्रमा समेटेर जनतामाझ प्रस्तुत गर्ने नै छु ।